ktmkhabar.com - सुनिता डंगोललाई भन्दा ठुलो अफर सहित सुमन सायमीलाई एमालेले गर्याे यस्तो प्रस्ताव !
सुनिता डंगोललाई भन्दा ठुलो अफर सहित सुमन सायमीलाई एमालेले गर्याे यस्तो प्रस्ताव !
९ असार, काठमाडाैँ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा मेयर पदमा उमेदवारी दिएर लोकप्रिय मत ल्याएका सुमन सायमीले प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उमेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यसै विचमा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट अफर गएको खुलासा भएको छ ।
उनले आफूमात्रै होइन, अरु स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि एकैठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संजाल बनाएर अघि बढ्ने सोचसहित उनी सक्रिय भएका छन् ।
काठमाडौंबाटै प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका सायमीलाई विभिन्न पार्टीबाटसमेत अफर आउन थालेको छ । उनलाई नेकपा एमालेले पार्टी प्रवेश गरेर काठमाडौंको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
उनले बरु स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संजाल बनाउने अभियानमा सक्रिय भएका छन् । काठमाडौंबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु रञ्जु दर्शना, पुकार बमलगायत व्यक्तिहरुसँग उनले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि संचारकर्म छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हरिशरण लामिछानेसँगसमेत सायमीको भेट भएको थियो । तर, लामिछानेसँग भने सहकार्य नहुँने सायमीले बताउन थालेका छन् ।
पहिलो भेटमा नै लामिछानेले झुक्याउने काम गरेकोले आफूले लामिछानेसँग भेट नगर्ने र उनीहरुसँग सहकार्यसमेत नहुँने उनको भनाइ छ । रवि लामिछाने र हरिशरण लामिछानेले आफूहरुको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संजाल गिजोल्ने काम गरेकोसमेत सायमीले बताएका छन् ।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितीको अध्यक्ष साथै उपत्यका सरोकार मञ्चक अध्यक्ष हुन सायमी । उनि एक दशकदेखि काठमाडौँका समस्यालाई नियाल्दै आएका अभियान्ता हुन् ।